[တရားဝင်] dr.fone - အားလုံးကို iOS & Android ကိုအသုံးပြုသူများသည်တစ် Toolkit ကို
သငျသညျ 100% မှာသင့်မိုဘိုင်းပြေးထားရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးသည်ကိရိယာများ။
iOS ကို ဒေတာများကို Backup ကို & restore
iOS က iOS ကို Screen Recorder
iOS အတွက် အပြည့်အဝဒေတာများနေတဲ့ Eraser
iOS က LINE မှာ Data Backup ကို & restore
iOS ကို Kik မှာ Data Backup ကို & restore
iOS အတွက် Viber ကိုဒေတာများကို Backup ကို & restore
အန်းဒရွိုက် မှာ Data Recovery ကို
အန်းဒရွိုက် မှာ Data Extraction
အန်းဒရွိုက် မှာ Data Eraser ကို
အန်းဒရွိုက် မှာ Data Backup ကို & restore
ပိုများသောဖုန်းကို tools များ
PC World ကို, laptop, tablet, iPad, Desktop PC များ, ပရင်တာများအဘို့အဦးဆောင်ပြန်လည်သုံးသပ် site ကို။
က CNET, site တစ်ခုလုံးကိုနောက်ဆုံးပေါ်လူသုံးကုန်နည်းပညာထိုးဖောက်ခြေရာခံ။
Softonic သင့်ရဲ့ device ကိုများအတွက်အကောင်းဆုံး applications များရှာဖွေတွေ့ရှိရန်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
မှ ပို. အကြံပြုချက်များ
ဒီပရိုဂရမ်ငါပွုနှင့်ပိုပြီးဖို့လိုအပ်သမျှကိုပြုတော်မူပြီ။ ကြှနျတေျာ့ကှနျပွူတာတစ်လထက်လျော့နည်းပျက်ကျတဲ့အခါမှာငါအစီအစဉ်ကိုဝယ်ပြီးနောက်, Wondershare '' ရဲ့ပံ့ပိုးမှုစာမျက်နှာ Re-မှတ်ပုံတင်ထုတ်ကုန်အားဖွငျ့အကြှနျုပျလမ်းပြတော်မူ၏။ Couldn''t ပျြောရှငျစေသတည်း။
Juan Carlos က F, iOS ကိုသဖြင့်
ယခုတွင်ငါသည်ခဏတစ်များအတွက်ကျိုးအန်းဒရွိုက်ဒေတာဆယ်တင်ရေးဆော့ဖျဝဲရှိသည်နှင့်အမျိုးမျိုးသောရုံးဖုန်းများပေါ်တွင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ သငျသညျသည်အခြားအပတ်ကရိုက်ချိုးရမည်မျှဖုန်းများမယုံနိုငျသညျ။ ဒါဟာတကယ်ကသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များမှ clients များအသေးစိတ်ကိုနှင့်အရေးကြီးသောစာရွက်စာတမ်းများရတဲ့နှင့်အတူကူညီပေးသည်။
iOS အတွက်အကောင်းဆုံး software ကို
ဒေါက်တာ Fone အံ့ဖှယျကရှင်းပြသည် step-by-ခြေလှမ်းညွှန်ကြားချက်နှင့်အတူတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ရိုးရှင်းသော UI ကိုရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ဘာမျှမဖြစ်နိုင်သည်မှားကိုသွားနိုင်ပါတယ်။ ဤသူကားငါကိုဖြတ်ပြီးလာဖူးတဲ့အကောင်းဆုံး Data Recovery Software များဖြစ်ပါတယ်။
Tyrone Williams က, iOS ကိုသဖြင့်
dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - အန်းဒရွိုက်မှာ Data Recovery ကိုကုန်ပစ္စည်း
Dr.Fone မယှဉ်နိုင်တဲ့, created နောက်ဆုံးပေါ်မဟုတ်သောကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်, ဘယ်တော့မှမကြီးမြတ် trully, အံ့သြဖွယ်အတွေးအခေါ်များကိုချွတ်စဉ်းစားမိတယ်။ ဤသူသည်သင်တို့ဆိုသည်ကား, Dr.Fone တစ်ဦးအမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကမျက်နှာသို့ android သူ့ဟာသူ၏မျက်နှာကိုပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ Dr.Fone devices များပင်လက်ျာဘက်ဆင်းအသေးဆုံးမိုက်ခရိုချစ်ပ်ဖို့, နည်းပညာအမျိုးမျိုးအတွက်အလုပ်လုပ်သည်။ ဒါဟာမသာကအရာခပ်သိမ်းနဲ့ဘာမှလုပျနိုငျကိုမည်သို့သောဤမျှလောက်များစွာသောအသစ်အံ့သြဖွယ်အမွေးအတောင်များပတ်ပတ်လည်ကမ္ဘာကြီးကိုလှည့်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာပဲနှင့်သို့သော်။ ဒါဟာရှိသည်ဖို့တစ်တန်ခိုးကြီးပါပဲ။
Gerard Katu, အန်းဒရွိုက်အားဖြင့်
ဒီအစီအစဉ်အတွက်ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့် !!!!!!!!! အံ့ဖွယ်အလုပ်ဖြစ်တယ် ဒါဟာငါဒါသညျဘုရားသခငျကိုကောင်းကြီးပေး) = ကျွန်မလုံးဝဒီအကြံပြု) = im ဒီတော့ပျော်ရွှင်ပေးရပါတယ်ရှာဖွေနေခဲ့သည်ရှိသမျှတို့သည်, txt တွေ့ရှိခဲ့
ဒို, က iOS တို့က
Excellent က !!!
ငါအစဉ်အမြဲငါ့သမီးတို့ချိုမြိန် 16 မွေးနေ့ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုဆုံးရှုံးခဲ့စဉ်းစားမိတယ်။ ဒီဆော့ဗ်ဝဲကိုငါ့စိတ်ဖောက်ပြန်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက် !! မြင့်မားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိခဲ့သည်ဆိုလျှင်, ဒေါက်တာ Fone ဆက်ဆက်ငါ့ထံမှရရန်တဦးတည်းပါလိမ့်မည်။ ထိုအခါငါငါ့ရှေ့မှာအကြောင်းလမ်းခံစားရစေဘာမှကိုတွေ့ဖူးဘူး။ ငါ၏အရန်ပုံငွေများငါတဦးတည်းတွေ့ထက်ဝက်စျေးနှုန်းကတယ်သည်အထိငါကမတတ်နိုင် couldn''t နှင့်မျက်ရည်ကျလုနီးပါးဖြစ်ခဲ့သည်ဒါကြောင့်အနိမ့်သောကြောင့်ငါတောင်ကူပွန်ကုဒ်၏ search တွင်အွန်လိုင်းသွားလေ၏ !! dr.fone ကျေးဇူးတင်ပါသည် !!